Akhri: Madaxweynaha Jubbaland ‘Madoobe’ oo maanta magacaabay labadiisa ku xigeen | HalQaran.com
Akhri: Madaxweynaha Jubbaland ‘Madoobe’ oo maanta magacaabay labadiisa ku xigeen
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa Talaadadii maanta wareegto madaxweyne ku soo magacaabey labadiisa ku xigeen, iyadoo mudooyinkanba uu waday la tashiyo ku aadan cida uu soo magacaabay.
Qoraalka uu soo saaray madaxweynaha, ayuu ku sheegay in magacaabistan uu kala tashaday gudoonka Golaha Sharci dejinta maamulkaasi, taasoo keentay in markii danbe uu ku dhawaaqo.
Sida ku cad war-saxaafadeedka, Maxamuud Sayid Aden ayaa loo soo magacaabay Madaxweyne ku-xigeenka 1aad ee Jubbaland.
Halka, C/qaadir Xaaji Maxamuud (Luga Dheere) isagana loo magacaabay Madaxweyne Kuxigeenka 2aad ee maamulka Jubbaland.
Labadan ku-xigeen uu soo magacaabay Madaxweyne Axmed Madoobe, ayaa ahaa ku-xigeenadiisii hore, waxaana durba soo baxaya dhaliilo loo jeedinayo inaanu la iman wax isbedel ah oo dhinaca maamulka ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa wali ku adkeysaneysa in la qabto doorasho Madaxweyne oo Jubaland ah oo ay dhammaan dadka ka wada qeyb qaataan, sharcina aanu eheyn habka uu ku soo baxay Axmed Madoobe oo ku guuleystay doorashadii dhacday 22-kii August.
Labada madaxweyne ku xigeen Jubbaland